Fancyco hita tamin'ny 2004. Lasa ny orinasa mpamatsy volamena ao Alibaba ny 14 taona. Tena manan-danja Nanova tamin'ny taona 2005 izay manana ny orinasa manokana. Tamin'ny 2015 Fancyco soa aman-tsara niditra tao Nizeria sy Ouganda tsena ka nanangana No.1 marika ny taratasy taratasy sy ny fahadiovana vokatra any amin'ireo firenena ireo. Ankehitriny isika dia manokana ao amin'ny fonosana sy ny fanontam-pirinty fitaovana. Ao amin'ny hoavy isika hametraka ny tombontsoan'ny ny mpanjifa sy ny zavatra ilain'ny ny tsena eo amin'ny toerana voalohany, hanokana ny tenantsika ho fahafaham-po ny mpanjifa 'fepetra sy ny fiandrasana, ary manome asa fanompoana ny akaiky indrindra ho anao.
Ny laboratoara manana maso mpiasa matihanina, antoka ho fanatitra mpanjifa mifototra amin'ny vokatra mahafeno fepetra mandroso fitaovana fitiliana. Tehina rehetra nandalo ny fizahan-toetra ny fisafoana-pirenena fahaizana na ny orinasa fahaizana fanadinana. Company vola an-tapitrisany efa be vola mba hividianana fitaovana QC, anisan'izany ketraka Flow Speed ​​famantarana, Ink friction famantarana, American Aglient Gas Chromatogram Instrument, hamandoana Meter, American X-Spectrophotometer fombam-pivavahana sy ny sisa. Ireo fitaovana mandroso sy fitsipika ambony rafitra QC orinasa antoka ny fiarovana amin'ny fomba mitohy vokatra fanavaozana sy ny fampandrosoana.
Ny orinasa tena vokatra azo zaraina ho sokajy roa: ny iray dia nampirina entana sy ny fitaovana fanontam-pirinty (ahitana: aseptic fonosana, fonosana sigara, dokam-barotra sy ny fitaovana fanontam-pirinty nomerika, sns); iray hafa dia ny fahadiovana sy ny fahadiovana vokatra (diaper, fiofanana pataloha, hareza, eo ambany pad, napkin, sns)
Tsy manizingizina fa vokatra tsara no fototra fifaninanana, manaraka ny fitsipiky ny optimizing mpanjifa sy ny fanavaozana continuously.to ho kilasy voalohany orinasa maneran-tany.
Amin'ny 2016, manana 5 famantarana, 77 fanavaozana Patents, 4 Provincial Teknolojia R. & D. Toerana, lasa mari-pankasitrahana iraisam-pirenena ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, IS022000, SGS, sns
Flexo Print System, Rotogravure Print System, Heidelberg offset Print System, David-Standard Lamination System, HL Lamination System, Soisa LF-IV700 / CH Flame kase System, Full-Automatic Dia-Cutting System, Slitting Machine, tsaina QC Machine, D. IMAVISION QC, Automatic fonosana & Delivery System
Ny orinasa fa namorona ny tranon'omby sy lavitra ezaka fandraharahana fifandraisana amin'ny mpanjifa avy any Azia Atsimo, Moyen-Orient, Afrika sy Amerika Atsimo. Mandritra izany fotoana izany 'Toptac' 'otac' famantarana efa voasoratra ara-panjakana noho ny mpanjifa eo amin'ny tsena eo an-toerana ary nanorina sampan-draharaha ao Pakistan.
Hodinihintsika izay mety mahakasika, mitsenà izay mety ilainao, To manome tolotra tsara amin'ny vidiny mirary izay mihoatra ny zavatra andrasana ny hoheverina mpanjifa. Mampiditra ny marina izahay, tsy fivadihana hatoky sy hanaja ho ny lafiny rehetra amin'ny raharaham-barotra